Gowalla Hubinta-guriga Mouse
Jimco, Nofeembar 19, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Bill Dawson
Shalay Gowalla ayaa ku dhawaaqay iskaashi lala yeesho mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn meeraha - Walt Disney, Inc .. Waxaa jira dad badan oo shakhsiyaad ah oo aan aaminsanayn baraha bulshada - iskaba daa barnaamijyada juqraafiyeed ee bulshada sida Gowalla, (Foursquare iyo Facebook Places.) Marka, maxay iskaashigan micno u sameyneysaa?
Marka hore, waa wax macno leh, maxaa yeelay Gowalla waxay ku saabsan tahay ka-qaybgalka isticmaalaha! Adeeggan, oo barnaamijkiisa lagu rakibay iPhone-kayga, wuxuu fududeynayaa ka-soo-galidda goobaha magaalada iyo adduunka oo dhan. Beddelka wadaagista ugaarsigaaga aad jeceshahay, talooyinkaaga iyo sawirradaada, waxaa lagugu abaalmarinayaa shaambado baasaboorkaaga ku jira iyo alaabooyinka dal-ku-dhigga ah ee lagu reebay goobaha. Waa mashquul aad u weyn oo ka mid ah dhuun-dhuumashada, ugaarsiga qashin-qubka, iyo khariidadaha dalxiiska - oo lagu soo ururiyey hal baakad si qurux badan loo sharraxay.
Wixii loogu talagalay Disney Parks, kaqeybqaadashada isticmaalehan ayaa loo tarjumay qaab kale si loo kordhiyo kaqeybgalka inta lagu jiro safarka, martigelinta martida kuna dhiirrigeliso inay sahamiyaan. Safarkaygii ugu horeeyey ee Walt Disney World, waxaan soo iibsaday Baasaboor EPCOT ah, kaas oo igu hogaamiyay dukaanka xusuusta ee dhamaan 9-ka wadan ee ku yaal World Showcase, halkaas oo aan ka heli karo shaabad iyo autograph xubin xubin ka ah. [Akhriso jumlada ugu dambeysa mar kale, suuqleyda.] Waalidkay waxaan u jiiday 9 dukaan oo kala duwan, anigoo ku badalaya shaambado! Waa maahmaahdii ugu da'da weyneyd ee guryaha Disney - "dhammaan raaciddu waxay ku dhammaataa dukaanka hadiyadda."
Doug waxaanan ku dhiirrigelinayaa macaamiisheenna inay adeegsadaan habka ugu hufan ee ay ula macaamilaan dadka isticmaala una cabbiraan beddelaad. Adduunyada sii kordheysa ee moobiilka iyo dijitaalka ah, maxaa diidaya in aad u isticmaasho qalab sida Gowalla oo kale ah? Iyada oo qayb ka ah daahfurka, Disney waxay martida siisay safarro dalxiis oo lagu muujiyey Gowalla oo martida u horseeda raacitaanno muhiim ah (iyo dukaamo) dhammaan jardiinooyinka. Taas beddelkeeda, Disney waxay heleysaa tirakoob qiimo leh oo ku saabsan tirada meelaha martida booqato, kuwaas oo raacitaannada ugu caansan yihiin, kuwaas oo beeraha ay ka helaan taraafikada ugu badan, iwm. macluumaad badan, taas oo markeeda loo adeegsan karo dib-u-hawlgelinta macaamiisha iyo abuuritaanka beddelaad wax ku ool ah.
Warbaahinta suuqgeynta ayaa had iyo jeer isbeddeleysa, laakiin kaqeybgalka isticmaalaha waa inuu ahaadaa mid joogto ah. Qalab noocee ah ayaa la heli karaa oo shirkaddaadu bilaabi kartaa tijaabinta si loo wanaajiyo kaqeybgalka iyo beddelaadda?
Bill Dawson waa khabiir ku xayeysiis email iyo codsi iimayl ah, latashina la leh shirkadaha waaweyn iyo softiweerka labadaba adeeg bixiyeyaal ahaan iskuduwaha e-maylkooda, adeegsiga iyo keenista Bill wuxuu la shaqeeyay qaar ka mid ah ururada ugu waawayn internetka, oo ay ka mid yihiin Zappos iyo Walmart. Isaga iyo xaaskiisa, Carla, waxay leeyihiin oo ka shaqeeyaan hay'ad u gaar ah, 4 Eeyaha Naqshadaynta.
Ku dar Qadkaaga Caawinta Twitter
Qalabka Horumarinta Wireframe wuxuu helayaa Is-dhexgal